IPixel 3a: Amanqaku ngokuchasene nokuzithenga | I-Androidsis
Ngaba kufanelekile ukuthenga iGoogle Pixel 3a?
Kule veki inye iGoogle Pixel 3a yaziswa ngokusemthethweniIifowuni ezimbini inkampani leyo ingena kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Kukuhamba komdla kuGoogle, okwangoku okwaziwa ngeefowuni zakhe ngaphakathi kwinqanaba eliphezulu. Kodwa, ukuthengisa okungalunganga kokugqibela okuphezulu, yamkelwe yinkampani, ibangele ukuba bangene kweli candelo lentengiso.
Ezi Pixel 3a zinikezelwe njengeefowuni ezimbini ezinomdla kuluhlu oluphakathi. Nangona Banamaxabiso aphezulu kakhulu Uninzi lweefowuni esikweli candelo lentengiso. Ngaba ezi fowuni kufanelekile ukuba zithengwe? Emva koko sikushiya ngamanye amanqaku ngokuchasene nokuthenga ezi fowuni zohlobo lwaseMelika.
1 Amanqaku axhasa ukuthenga iPixel 3a
2 Bendlela yokuthenga iifowuni ezintsha
Amanqaku axhasa ukuthenga iPixel 3a
Eyona ndawo inamandla kwezi Pixel 3a yikhamera yayo, njengesiqhelo kwiifowuni zikaGoogle. Inkampani ibisaziwa njengesithsaba njengeyona nkampani ineyona khamera ibalaseleyo kwi-Android. Kwinxalenye enkulu umbulelo kuya kufuneka unike isoftware. Ekubeni i-app yekhamera yePixel yenye yezona zinto zilungileyo, ngokungathandabuzekiyo iphucula ukusebenza kwayo. Le yinto eshiyekileyo kolu luhlu lweefowuni, ke ngaphandle kwamathandabuzo yimpahla enkulu abasishiyayo, enokwenza abasebenzisi abaninzi babe nomdla wokuyithenga ngaxa lithile. Ngokungathandabuzekiyo yinto ebaluleke kakhulu namhlanje.
Kwelinye icala, ekubeni ziifowuni ngaphakathi koluhlu lwePixel, sele sisazi ukuba baya kuba yiyo Kuqala ukuba nokufikelela kuhlaziyo. Ewe kulungile Kwimeko ye-Android Q kufuneka balinde inyangaNgamanye amaxesha, ziya kuhlala ziyimodeli zokuqala ukuba neenguqulelo ezintsha zenkqubo yokusebenza okanye uhlaziyo lokhuseleko. Isiqinisekiso esibalulekileyo kubathengi abaninzi. Ngaphandle kwamathandabuzo ibenza bafaneleke malunga noku, kunye nokunika uxolo lwengqondo.
Kwakhona kufuneka gxininisa ukuba ukulungiswa kwayo kulula, njengoko sibonile. Ke ngoko, ukuba kunokwenzeka ukuba kukho ingxaki kwezi Pixel 3a, iindleko zokulungisa zinokubulela ngenxa yokuba kulula ukuyivula ifowuni okanye ukubuyisela ezinye izinto zayo. Enye into elungileyo ekufuneka uyiqwalasele. Ngokukodwa kwimeko yokuba zisetyenziselwa iinkampani, ezi ntlobo zemiba zinokuba ngumdla.
Bendlela yokuthenga iifowuni ezintsha
Ixabiso lingaphezulu kwawo onke amanqaku adlala ngokuchasene uninzi lwezi fowuni zimbini uphawu American. IPixel 3a ifika ngexabiso lama-399 euros kwimarike. Ngelixa imodeli yeXL inexabiso kwi-479 euro. Ke ngoko, amaxabiso aphezulu kakhulu kunalawo esiwafumana namhlanje phakathi kuluhlu lwe-Android. Apho sinokubona khona iimodeli ezininzi ngamaxabiso aphakathi kwama-200 nama-300 euros ezikhoyo. Into enokubangela ukuba bangathandwa kwaye bangathengisi kunye nenkampani enethemba.
Ngakolunye uhlangothi, uyilo lwezixhobo alothusi kakhulu, iphefumlelwe sisizukulwana sesibini sePixels. Uyilo olulungileyo, kodwa oko akumangalisi okanye kuvuselele. Kunokubakho abathengi abangonwabanga kwaphela yile uyilo lweefowuni. Iyahambelana, kodwa ayisiyiyo intle kwintengiso.
Ibhetri yinto ephakamisa ukuthandabuza kwimeko yePixel 3a, kunye nomthamo wayo we-3.000 mAh. Kuba incinci okanye iqine ngohlobo olukumgangatho ophakathi kule mihla. Oku akunjalo nge-3a XL, ene-3.700 mAh ebonelela ngokuzimela okuhle. Kodwa kumzekelo omncinci kunokwenzeka ukuba kukho abathengi abangenakho ukuzimela okwaneleyo, kuxhomekeke ekusebenziseni kwabo kweso sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ngaba kufanelekile ukuthenga iGoogle Pixel 3a?
Ungalufihla njani unxibelelwano lwakho lokugqibela kuWhatsApp
Ityhilwe onke amanqaku e-Huawei Y9 Prime (2019) yinkampani enye